Sina 22.5X11.75 Super kalitaon'ny kodiarana sandoka na sisin-dàlana ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy entana | Sombiny fiara MBP
22.5X11.75 Super kalitaon'ny kodiarana sandoka na sisin-dàlana ho an'ny famoahana mavesatra
1. Karazana fantsona, karazana tubeless ary sisin'ny kodiarana misy demountable no misy
2. Fehin-kodiarana ho an'ny tranofiara maivana sy mavesatra ho an'ny kamio, ary koa ho an'ny fitaovana Agricultral sy Engineering.
3. Ny famaritana dia fenitra iraisam-pirenena.
4. fonosana pallet mahazatra
5. 20 andro ora fanaterana
Izahay dia namolavola sisin'ny kodiarana kodiarana feno, sisin'ny kodiarana tsy misy tubeless, sisin'ny kodiarana fiara ary sisin'ny kodiarana injeniera.
Tahaka ny fampiharana, misy sisin-kodia maivana, sisin'ny kodiarana mavesatra, sisin'ny kodiarana fambolena ary sisin'ny kodiarana injeniera.
Tahaka ny karazana kodiarana dia misy sisin'ny kodiarana fantsom-boaloboka, sisin'ny kodiarana tsy misy fantsom-batana ary sisin'ny kodiarana midina.
Toy ny karazana materialy, dia misy sisin'ny vy sy kodiarana vita amin'ny kodiarana.
Araka ny fomba fanodinana azy dia misy sisin'ny kodia sy sisin'ny kodiarana.
Fa maninona no tsy mitovy ny kodiarana an'ny kodiarana aloha sy aoriana? Ucks
Ny kodiarana dia mitovy, miforitra amin'ny lafiny iray ary mifanakaiky amin'ny lafiny iray, fa ny toerana fametrahana dia tsy mitovy. Raha apetraka tsirairay ny kodiarana eo alohan'izay dia apetaho ny sisin'ny convex, ary atambatra ireo kodiarana roa aoriana. Raha apetraka eo amin'ny sisiny ny convex, dia ho voajanahary izy io.
Ny kodiarana any aoriana amin'ny fiara dia manana enta-mavesatra lehibe, ka ny kodiarana aoriana dia raikitra amin'ny kodiarana roa. Ho an'ny fanamorana ny fametrahana azy ireo ary ahafahana mandray ireo singa vita amin'ny frein, ny kodiarana dia noforonina mba ho afaka amin'ny lafiny iray. Rehefa miaraka ny kodiarana roa dia ilaina ihany ny manodina visy vitsivitsy. Ny kodiaran'ny fiara rehetra dia natao toy izao mba hahamora azy
Ity karazana fomba fametrahana ity dia natao ho an'ny tanjony. Mba hampitomboana ny enta-mavesany dia ny kodiarana aloha no kodiarana mpitari-dalana, izay mitondra ny ampahafolon'ny enta-mavesatra feno, noho izany dia misy kodiarana kodia iray amin'ny lafiny iray, ary ny aoriana kosa dia ny kodiarana mampiditra. Ohatra, raiso ny hub misy kodiarana 22.5x8.25 ohatra, ny enta-mavesany tokana dia 4 taonina, ary ny ao ambadiky ny tranofiara dia toradroa telo sy kodiarana 12, izay mety 48 taonina. Raha te hitondra lanja 48 taonina ianao, ary ny tadin'ny kodiarana tokana amin'ny ilany amin'ny tranofiara dia mila famaky enina, raha ny vidiny dia tsara tokoa ny abacus an'ny mpanamboatra.
Saingy, amin'izao fotoana izao, namokatra rim hub malalaka izahay, 22.5x11.75 ary 22.5x14, izay mamaha ny olan'ny fametahana habaka roa tonta ary mamonjy ny vidiny.
Wheel hub dia antsoina koa hoe rim-kodia. Araka ny toetra sy ny takian'ny modely isan-karazany, ny fizotran'ny fitsaboana amin'ny kodia kodia dia handray fomba hafa, izay azo zaraina ho loko mofomamy sy hosodoko elektrika.
Misy karazana plating roa amin'ny foibe kodiarana.
Ny foiben'ny fiara tsotra dia tsy dia jerena amin'ny bika aman'endriny, ary ny fanaparitahana ny hafanana tsara dia takiana fototra. Ny fizotrany dia mandray an-tanana ny fitsaboana loko vita amin'ny laoniny, izany hoe manaparitaka aloha vao manamboatra lozisialy. Ny ekonomia dia lafo kokoa, ary tsara tarehy ny loko ary maharitra mandritra ny fotoana maharitra. Na dia esorina aza ny fiara dia mijanona tsy miova ny lokon'ny hub. Maro ny fizotran'ny fitsaboana ny kodia kodiarana Volkswagen no manamboatra loko, toy ny Santana 2000, xialijunya, Zeitgeist, atsinanana Lingshuai na Honda Odyssey. Ny lamaody avant-garde, lokon'ny kodiarana miloko mavitrika dia ny fampiasana teknolojia fandokoana ihany koa. Ity karazana hub ity dia antonony ny vidiny ary feno amin'ny famaritana.
Ny hatevin'ny kapila ible azo ovaina)
Manodidina ny Wt. (kg)
A: Amin'ny ankapobeny, ny entana dia voaisy tombo-kase ao anaty kitapo paosy ary fonosina anaty baoritra sy pallet na tranga hazo.
A: T / T (petra-bola + fifandanjana alohan'ny fanaterana). Hasehonay anao ny sarin'ny vokatra sy fonosana alohan'ny handoavanao ny mizana.
A: Amin'ny ankapobeny dia maharitra 25 ka hatramin'ny 60 andro aorian'ny fahazoana ny vola aloanao mialoha. Ny fotoana fandefasana manokana dia miankina amin'ny entana sy ny haben'ny baikonao.
A: Afaka manome ny santionany maimaimpoana izahay raha manana singa vonona amin'ny tahiry, fa ny mpanjifa kosa dia tsy maintsy mandoa ny vidin'ny mpampita hafatra.
F7. Ahoana no anaovanao ny orinasanay maharitra sy fifandraisana tsara?
A: Manome serivisy fijanonana tokana izahay ho an'ny mpanjifanay, manomboka amin'ny singa manokana ka hatramin'ny vokatra farany tafangona, mamaha olana isan-karazany ho an'ny mpanjifa samihafa eran'izao tontolo izao.
Teo aloha: Kodiarana ambongadiny vita amin'ny alim-borona vita amin'ny alim-borona / Visy vita amin'ny firaka / Fehin'ny kodiarana maivana 22,5 × 7,5, 22,5 × 8,25, 22,5 × 9.00
Manaraka: Vidina mora karbona Carbon vy 16 "/ 20" fonosana ho an'ny tranofiara fitaterana solika
Ny kiraro freins non asbestos avo lenta 190 ...
Lohataona ravina Mercedes 0003200202 Lohataona lohataona ...
Fitaovana legioma vita amin'ny vy azo antoka vy Edib ...
Kodiarana kamio kamory mavesatra 3 PC 8,5-24
Kodiarana vy 8.5-20 mahery sy maharitra ho an'ny ...